Oonobangela kunye neziphumo zongcoliseko lwengxolo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Namhlanje abantu ababini kwabathathu behlabathi bahlala kwiidolophu ezinkulu. Izixeko ziye zaba kwimithombo yokukhupha ingxolo enkulu kunye nongcoliseko lwesandi. Owona mthombo wengxolo ezixekweni zizithuthi ezindleleni. Ukuxinana kweemoto, ukugcwala kwabantu, ukuxinana kwezithuthi, iimpondo, njl. Zikhupha ingxolo kwaye zinokubangela izifo ebantwini.
Umbutho wezeMpilo kwiHlabathi (i-WHO) icwangcisa umda wosuku wee-decibel ezingama-65 (dB) ukuze ingabi yingozi kwimpilo. Nangona kunjalo izigidi zabantu zichaphazeleka kumanqanaba aphezulu yonke imihla. Yintoni enokwenziwa kule meko kwaye yintoni ingozi yokuvezwa okuqhubekayo kumanqanaba aphezulu engxolo?
1 Iimpawu zongcoliseko lwengxolo
2 Ingxolo ezixekweni
2.2 Iingxaki zentliziyo
2.3 Iingxaki zokuva
3 Ingxolo yokungcola ivelisa abantu abaninzi abagulayo
4 Ingxolo kunye namanqanaba ezempilo
5 Isandi sendalo
6 Ungakuphepha njani ukungcoliseka kwengxolo ezixekweni
Iimpawu zongcoliseko lwengxolo
Ingxolo ungcoliseko ineempawu ezithile ezahlulahlula kwezinye izinto ezingcolisayo:
Sesona singcolisi sitshiphu ukuvelisa kwaye sifuna amandla amancinci kakhulu ukuba sikhutshwe.
Kunzima ukulinganisa kunye nokulinganisa.
Ayishiyi intsalela, ayinasiphumo sonyukayo kwindalo esingqongileyo, kodwa inokuba nefuthe elongezelekayo kwiziphumo zayo emntwini.
Ineradiyo yesenzo incinci kakhulu kunezinye izinto ezingcolisayo, oko kukuthi, ibekwe kwiindawo ezithile.
Awuhambi ngeenkqubo zendalo, njengomoya ongcolileyo oqhutywa ngumoya, umzekelo.
Kuqondwa ngengqondo enye kuphela: ukuva, okwenza ukuba isiphumo sayo singathathi ntweni. Oku akunjalo ngamanzi, umzekelo, apho ungcoliseko lunokubonwa ngenkangeleko yalo, ivumba kunye nokungcamla.
Ingxolo kunye neengcali zongcoliseko lwengxolo Ngabo balinganisa amanqanaba engxolo ezixekweni kwaye bavelise iimephu zengxolo. Benza amanqanaba engxolo afunyenwe kwingingqi nganye yeedolophu nakwinqanaba lomda emini nasebusuku ekufuneka befumene impilo entle.
Imibundu yengxolo iphezulu emini kunasebusuku. Ukuvezwa okungapheliyo kwinqanaba eliphezulu lengxolo kunokubangela ukugula okanye iingxaki ezinje uxinzelelo, unxunguphalo, ukubonakala kweengxaki zentliziyo Kwaye nasebantwaneni, iingxaki zinokubonakala apho bezonakele kwinkqubo yokufunda.
Kukho ezinye iingxaki ezinxulumene namazinga aphezulu engxolo anje ngala:
Kwiindawo ezisezidolophini ezinobomi obuphezulu bobusuku njengeebhari, ii-pubs, ii-discos, izihlwele, njl Banethuba lokuba namazinga aphezulu engxolo ezinzulwini zobusuku. Oku kubangela ubunzima bokulala kubantu abahlala kwezi ndawo.. Ukuqhubeka kobunzima bokulala kunye neeyure ezimbalwa zokulala kubangela ukulala. Ukongeza, ukuphuthelwa kwonyusa ukubonakala kokuphazamiseka kwengqondo okunje ngoxinzelelo okanye uxinzelelo; kunye notshintsho lwamajoni omzimba, ukulibala kunye nobunzima bokufunda.
Kukho izifundo ezibonisa ukuba kwiindawo ezinamanqanaba aphezulu e ingxolo inyukile ukwamkelwa esibhedlele.
Elona nqanaba liphezulu lokuvezwa kwengxolo kucetyiswa yi-WHO ngama-65dB emini. Ukuchazwa okungapheliyo kwemihla ngemihla kumanqanaba engxolo ngaphezulu kwe-65 dB okanye ukubonakaliswa okucacileyo ngaphezulu kwe-80-85 dB kunokubangela ukuphazamiseka kwentliziyo yexesha elide, nokuba abo bachaphazelekayo abaziboni iimpawu zesifo. Abo bachaphazelekayo abayazi kuba umzimba uphendula amanqanaba aphezulu engxolo ngokwenza iihomoni zovalo ezonyusa uxinzelelo lwegazi, ukubetha kwentliziyo, i-vasoconstriction kunye nokulenza ligazi.
Ngokucacileyo, abantu abadala banolwazelelelo kwaye basemngciphekweni kolu hlobo lokugula ngenxa yokuvezwa okungapheliyo kwinqanaba eliphezulu lengxolo.
Abantu abahamba rhoqo emsebenzini okanye kwiindawo zokuzonwabisa ezinamaqondo aphezulu engxolo badla ngokwenzakala kukuva. Oku kwenzakala kutshabalalisa iiseli kwindlebe yangaphakathi kunye nokonakalisa ukuva.
Ukuphulukana nokuva kuvelisa iziphumo ezichaphazela ubomi bethu bemihla ngemihla, kuthintela ubudlelwane bezentlalo, kunciphise ukusebenza kwabafundi kunye nomsebenzi, kubangele iimvakalelo zokwahlulwa, ubulolo kunye noxinzelelo.
Ukuthintela oku kuyacetyiswa:
Ziphephe iindawo ezinengxolo
Khusela iindlebe zakho ngabakhuseli abafanelekileyo
Umabonwakude kunye noonomathotholo bavulwe ngevolumu ephakathi
Xa usebenzisa ii-headphone, musa ukugqitha kuma-60% evolumu ephezulu
Musa ukugqitha ekusebenziseni kwazo ngaphezulu kweyure enye ngosuku
Sebenzisa izixhobo ezinomthamo wevolumu ukuze ungagqithi kumanqanaba asempilweni
Xa uqhuba, sukusebenzisa uphondo ngokungeyomfuneko
Ngexesha lomnyhadala womculo hlala kude nezithethi
Ingxolo yokungcola ivelisa abantu abaninzi abagulayo
Ukulinganisa kunye nokuthelekisa ubuzaza bongcoliseko lwengxolo, uphando lwenziwa kwiZiko i-Barcelona kwiZiko lezeMpilo lezeMpilo (ISGlobal), iziko elikhuthazwe yi "la Caixa" Banking Foundation, ethe yaqikelela, okokuqala, umthwalo Isifo esibangelwa kukucwangciswa kwedolophu kunye nezothutho e-Barcelona.
Kuzo zonke izinto ezingqongileyo ezinokubangela izifo kubemi, yingxolo yezithuthi ebangela ubuninzi, iphakame nangaphezulu kunezifo ezinxulumene nokusilela kokusebenza komzimba kunye nongcoliseko lomoya.
Olu phononongo luye lwafikelela kwisigqibo sokuba ukuba iBarcelona ibicwangcise ngcono izithuba zasezidolophini kunye nezothutho inokuhlehlisa ukuya kuthi ga kwi-3.000 yokufa ngonyaka. Ukongeza, ukuba izindululo zamanye amazwe zokuphuhliswa kwemithambo yomzimba ziye zafezekiswa, kuthintelwa ukungcoliseka komoya, ingxolo kunye nobushushu, iimeko ezili-1.700 zezifo zentliziyo inokuthintelwa unyaka nonyaka, ngaphezulu kwe-1.300 yamatyala oxinzelelo lwegazi, kufutshane namatyala angama-850 ukubetha kunye neemeko ezingama-740 zokudakumba, phakathi kwabanye.
Ingxolo yongcoliseko ibangela izifo ezingaphezulu kongcoliseko lomoya
Ingxolo kunye namanqanaba ezempilo
Isikali sengxolo esilinganiswe kwii-decibel ngokwendlebe yomntu yile:
0 Ubuncinane benqanaba lokuva
10-30 Inqanaba eliphantsi lengxolo elilingana nencoko ephantsi
30-50 Inqanaba eliphantsi lengxolo elilingana nencoko eqhelekileyo
55 Inqanaba le-Acoustic intuthuzelo ngokomndilili
65 Elona nqanaba liphezulu livumelekile lokunyamezelana kwe-acoustic esekwe yi-WHO
65- 75 Ingxolo ecaphukisayo elingana nesitalato esitratweni, umabonwakude ophezulu ...
75-100 Ukuqala kokulimala kwendlebe, kubangele ukungonwabi kunye novalo
100-120 Umngcipheko wokungeva
120 Umngcipheko we-Acoustic
140 Elona nqanaba liphezulu lendlebe lomntu linokumelana nalo
Ngongcoliseko lwengxolo, iimeko zasedolophini kunye nenqanaba eliphezulu lengxolo siyalibala isandi sendalo. Abantu abaninzi, nditsho nokunyuka intaba, banxiba ii-headphone kwaye bamamele umculo endaweni yokonwabela isandi sendalo.
Isipho esisandi sentaka okanye esamanzi awela emthonjeni siyalahleka ngenxa yenkqubo efana nohlobo lokungeva. Uxolo lwe-chorus lwehlabathi lendalo lusengozini yokunyamalala kunye nokuphulukana nokubaluleka kwisizukulwana esikhoyo, njengoko abantu bengahoyi izandi ezibangqongileyo.
Amanqanaba engxolo yangasemva ayanda kwiindawo ezithile asongela abantu ukuba bangazazi izandi ezithile ezinje ingoma yecanary, ukuwa kwamanzi okanye umgqumo wamagqabi emithi xa kukho umoya, onokuvakala amaxesha ngamaxesha nakwiindawo eziluhlaza ezidolophini.
Akukaziwa ngokuqinisekileyo ukuba kutheni, kodwa kukho izifundo eziqinisekisa ukuba ukumamela isandi esenziwa yindalo iluncedo kwezempilo. Zolisa ingqondo, phumla izihlunu, thintela uxinzelelo, njl. Oku kunokuba kungenxa yokuba umntu kwizigidi zeminyaka yokuzivelela kwezinto unxibelelanise izandi ezizolileyo zendalo nokhuseleko.
Ungakuphepha njani ukungcoliseka kwengxolo ezixekweni
Kuba ukugcwala kwendlela ngowona mthombo wengxolo, kufuneka sigxile ekunciphiseni. Kukho izakhiwo ezakhiweyo koohola bendlela abadlula kufutshane namakhaya okanye abo basezidolophini (abadlula embindini wedolophu) ukunqanda ingxolo egqithileyo.
Umzekelo, sifumanisa izikrini zengxolo. Ezi ziindonga ezakhiwe emaphethelweni oohola bendlela ukunciphisa ubungakanani bengxolo edlula kubo. Kwiindawo ezisezidolophini banokuba yimithi kunye namatyholo athi, ngaphandle kokunciphisa ingxolo, acoce umoya ongcolileyo.
Kukho iiprojekthi zokusebenzisa amandla ahlaziyekayo kunye nokuphepha ingxolo ephuhliswayo. Imalunga nophahla lwelanga kwimigaqo. Gubungela iindlela, oohola bendlela kunye noololiwe abanezimbozo zelanga ze-photovoltaic Sele ikhetho kunye nokufakwa okungathandekiyo ekusebenzeni, njengololiwe ohamba ngesantya esiphezulu eBelgium.
Inkathazo ebangelwe lilanga ekuphumeni nasekuseni iya kuthintelwa ikakhulu, kunye nobushushu beenjini kwiindawo ezinesidima njengendawo eziyintlango kunye namazwe ashushu kwaye ukunciphisa kakhulu ingxolo ekhutshwa kwiindawo ezisezidolophini. Ukongeza, sinegalelo lamandla elibandakanya oku, livela kumthombo ohlaziyekayo, ongangcolisiyo kunye nosebenzayo.
Njengoko ubona, ingxolo ayibonakali kwiliso lomntu, kodwa iziphumo zayo zibi kakhulu. Ke ngoko, kufuneka senze eyethu indima ukunqanda ingxolo egqithisileyo kwaye singabinangxaki zempilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ingxolo ungcoliseko
kevin carruitero sitsho
Kwimeko yam bendihlala ndimamela umculo onee-headphone iiyure ezininzi kwisandi esigqithisileyo kwaye eneneni bendinexinzelelo kunye noxinzelelo oluninzi.
Enkosi ngegalelo, imibuliso evela ePeru!
Phendula uKevin Carruitero
IMadrid yenza isicwangciso sokuphucula umgangatho womoya
Amandla amasebe e-Bankia aya kuba yi-100% evuselelekayo